Al-Shabaab oo la wareegay Saldhig ay ku sugnaayeen Ciidamada Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-Shabaab oo la wareegay Saldhig ay ku sugnaayeen Ciidamada Kenya
Al-Shabaab ayaa waxaa ay weerar culus ku qaadeen Saldhig ay ku sugnaayeen Ciidamada Dowladda kenya,kaas oo ku yaalla deegaanka Dhicise oo qiyaastii 30 KM u jira magaalada Gaarisa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Weerarka kadib ayaa waxaa la sheegay in uu halkaasi ka dhacay dagaal culus oo sababay khasaaro kala duwan,kaas oo dhex-maray Ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Al-Shababa ee weerarka qaaday.
Al-Shabaab ayaa warar ay ku baahiyeen baraha ay ku leeyihiin Internet-ka ayaa lagu sheegay in ciidamada Booliska dalka Kenya ay ka qabsadeen deegaankaasi, islamarkaana ay dab qabad siiyeen xarun ay shirkadda Safaricom ku laheyd halkaasi.
Saraakiisha Ciidamada Booliska dalka Kenya weli dhankooda kama hadlin weerarka lagu qaaday Saldhiga ay Ciidamadooda ku lahaayeen duleedka Gaarisa,isla markaana Shabaab ay ku sheegteen inay la wareegeen.
← Carruur Cudurka shuban Biyoodka ugu geeriyootay Bakool → Guddoomiyihii Awdheegle oo qarax lagu dulay